प्रचण्डको आवश्यकता यस कारण ? प्रचण्डलाई जिताऔँ – Saurahaonline.com
प्रचण्डको आवश्यकता यस कारण ? प्रचण्डलाई जिताऔँ
नेपालमा १० वर्षे शसस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेका पुष्पकमद दाहाल प्रचण्ड मुलुकमा दुई पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रा थालेको ११ वर्षपछाडि दाहाल आफ्नो गृह जिल्लाबाट निर्वाचनको मैदानमा होमिएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका दाहाल १२ बुँदे सहमतिको ज्यूँदा हस्ताक्षरकर्ता समेत हुन् । सात दलको तर्फबाट काँग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरीजा प्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फबाट दाहालले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । गिरीजा दिवंगत भइसकेका कारण शान्ति सम्झौताका एक मात्र जिवित हस्ताक्षरकर्ताको रुपमा दाहाल चितवनबाट चुनावमा होमिएका छन् ।
देशको आमूल परिवर्तनका लागि बन्दुक उठाएका व्यक्ति बाकस लिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकाले उनलाई सघाउन आजको आवश्यकता हो । बन्दुकबाट भन्दा खुला राजनीतिबाट देशमा परिवर्तन गर्ने निष्कर्ष सहित चुनावी मैदानमा देशका उच्च नेतालाई चितवनले पाउनु एउटा अवसर समेत हो ।
नेपाल संघीय ढाँचामा गइसकेको अवस्थामा तीव्र विकासको लागि दाहाललाई चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट जिताउँदै चितवन सहित समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार बनाउनु आजको आवश्यकता हो । दाहालको जितसँगै चितवनको विकास मात्रै नभएर मुलुकको राजनीतिक निकास समेत हुने हामीले अपेक्षा गर्न सक्छौँ । शान्ति सम्झौतालाई टुंगाउन, द्वन्द्व पीडितहरुको घाउमा मल्हम लगाउन, आर्थिक क्रान्ति गर्नको लागि हामीले प्रचण्डलाई रोज्न सक्छौँ ।
प्रचण्डले चितवनको विकासको लागि आफ्नै गृहजिल्लाबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएको बेलामा हामी सबैले उनलाई साथ दिँदै समृद्ध नेपालको चाहना पुरा गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय छवि भएका दाहालले समृद्ध चितवन निर्माण गर्नको लागि आफ्नो प्रतिवद्धता समेत सार्वजनिक गरेका छन् । नवलपुर र चितवनलाई जोड्न नारायणगढदेखि पश्चिम गोलाघाटसम्म चार वटा पुल निर्माण गर्ने, चितवनको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने, युवाहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि लैजाने, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट माडी प्रवेशको लागि सुरुङ मार्ग अथवा आकाशे पुल निर्माण गर्दै समृद्ध चितवन बनाउने दाहालको योजना छ । यस पटक दाहाललाई मतदान गरि उनले सोचेको समृद्ध र आधुनिक चितवन निर्माण गर्न हामी सबैले दाहाललाई मतदान गरौँ ।